दिल बस्यो पञ्चासेमा (फोटो)
byShyam Rana magar - November 20, 2020
दिउँसो १ बजे पोखरा आइ पुगे । दिल भने पञ्चासेतिरै बसे जस्तो छ । हरिचोकमा गाडीबाट ओलिएपछी त झन्, गाडीको प्या,.. पु ले शान्त पञ्चासे बहुत खुब मिस भयो । फर्किन त फकिएँ । दिल भने पञ्चासेतिरै छ।
शान्त, सुन्दर पञ्चासेमा यसरी दिल बस्यो कि, अहिले म पञ्चासेको फोटो हेर्दै छु । फेसबुकका भित्ताभरि पञ्चासेका फोटोहरु टाँसि रहेछु । घरबेटीको घरको स्यानो कोठाको स्यानो कोठा भित्र बसेर घरि घरि मोबाइलको ग्यालरि खोल्दै पञ्चासेलाई हेर्दैै छु । बहुत खुब मिस गर्देै छु ।
भदौरेबाट बिहान १० बजेको गाडी चढेर १२ बजे पोखरा उपत्यका आई पुगेको थिएँ । पोखरा आई सकेपछि पञ्चासे बहुत सम्झनामा आयो । उतै तिर फर्की जाउ जस्तो पनि लाग्यो । पञ्चासेलाई सम्झी रहेछु म । पञ्चासेलाई लभ यु ।
पञ्चासे ब्लग लेखौं कि जस्तो पनि नलागेको होइन । तर, आज लेख्दिनँ । पञ्चासेलाई मिठो गरि आफूमा समेट्न चाहन्छु । त्यसपछि सुनाउँदा मिठो होला कि ! होइन र !
यात्रा अनुभूति सेयर नगरे पनि पञ्चासेको फोटो भने म सेयर गर्छु । सेयर नगरि मनले मानेन नि त ! तपाई पनि पञ्चासे फोटो बाटै घुम्नुस् है त ! जानु भएको भए त राम्रै भयो । नगएको भए पनि यि फोटोहरु हेरि सकेपछि त नगई मनले मान्ला र !